America Yonetsekana neMagwaro Ayo Ari Kuburitswa neWikiLeaks
Gunyana 06, 2011
America inoti haisi kufara uye iri kunetsekana zvikuru nekuburitswa kuri kuramba kuchiitwa zvinyorwa zvayo neWikiLeaks.
Mumiriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe, Muzvare Sharon Hudson-Dean, vanoti zviri kuburitswa neWikiLeaks izvi zvinoisa hupenyu hwevanhu vakawanda munjodzi. Muzvare Hudson-Dean vanoti izvi zvinoisawo kuchengetedzwa kwenyika yavo parumananzombe.
WikiLeaks iri kuburitsa magwaro ari pamusoro pehurukuro dzakaitwa muchivande pakati pevashandi vemumizinda yeAmerica munyika dzakawanda kusanganisirawo Zimbabwe.
Mamwe magwaro anotaura pamusoro peZimbabwe anobata nyaya dzaitaurwa muchivande nenhengo dzeZanu PF idzo dzinofunga kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanofanirwa kuchisiya basa nekuti vachembera.
Zvimwe zvinonzi zvakataurwa nenhengo dzeMDC-T zviri maererano nemaonero adzo mutungamiri webato radzo, VaMorgan Tsvangirai, avo vadzinoti havana njere dzakapinza mukutora matanho akasimba mubato.
Mukuru webazi reAfrica Governance, Monitoring and Advocacy Project musangano re Open Society Institute – Southern Africa, Va Ozias Tungwarara, vanotiwo kuburitswa kwemashoko aya kungangokonzera kusawirirana nekukanganisa mashandiro evanhu mumapato ose ari munyika.
Hurukuro naMuzvare Sharon Hudson-Dean